प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा सलह किन्ने कृषिविज्ञ राईको घोषणा, सिद्रा बनाएर खाने र कुखुरालाई दिने, वि’ष किनेर घु’स खाने नबनाउ ! – Sanchar Patrika
प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा सलह किन्ने कृषिविज्ञ राईको घोषणा, सिद्रा बनाएर खाने र कुखुरालाई दिने, वि’ष किनेर घु’स खाने नबनाउ !
June 30, 2020 174
१६ असार, खोटाङ । कृषिविज्ञ मदन राईले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा सलह खरिद गर्ने घोषणा गरेका छन् । भारतबाट तराई प्रवेश गरेको सलह खोटाङका विभिन्न स्थानीय तहमा शनिबार एकैसाथ देखिएपछि कृषिविज्ञ राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने बताएका हुन्। “कसैले समाएर ल्याइदिए किलोको एक सय रुपैयाँले, एक हजार किलोसम्मको एक लाख रुपैयाँले भुक्तानी गरिनेछ”,
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा सुभद्रा मदन फाउण्डेशन सञ्चालन गरिरहेका कृषिविज्ञ राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “माछामासुको सट्टामा सलह भुटेर विद्यार्थीलाई विभिन्न परिकार बनाएर खुवाउनेछौँ ।” कृषिविज्ञ राईले आइतबार भनेका छन् , “पक्रेर ल्याएको सलहबाट केही पशुपक्षीको दाना बनाउँछौँ । सिद्राको सट्टामा यसको प्रयोग गर्नेछौँ । केही हामीसँग भएको सबैखाले पक्षीलाई खुवाउने छौँ ।”
उनले सलह किरा नियन्त्रणका नाममा वि’ष किनेर घु’स खाने माध्यम नबनाउन र वातावरण वि’षालु नबनाउन आग्रह गरेका छन्। विषले सलह म’रे पनि उक्त म’रेको सलह खाने पशुपक्षीसमेत मर्ने हुँदा सलह नियन्त्रणका नाममा विष प्रयोग नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको राईको भनाइ छ ।
शनिबार बिहान बुटवल आसपासबाट फैलिएको सलह किरा जिल्लामा पनि देखिन थालेपछि किसानमा त्रा’स फैलिएको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा एकसाथ सलह देखिएपछि जिल्लास्थित स्थानीय तह तथा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङको आ’पतकालीन बैठक बसेर नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ ।
Prevटिकटकमा भेटिइन साम्राज्ञिको डुब्लिकेट अनुहार , को हुन उनी? (भिडियो सहित)
Nextटिकटकको यस्तो भिडियोले ३ वर्ष जे’ल साढे २२ लाख ज’रिवाना !
पित्तथैलीमा पत्थरी किन हुन्छ ? पत्थरी भएको कसरी थाहा पाउने ?
एकै परिवारका बाबु, आमा र बच्चा मृत फेला, प्रहरी घटनास्थलमा
ताइवानमा चंगाले ३ वर्षकी बालिका उडाएपछि . . . (भिडियो सहित)